“Warbixin Gobolka Sanaag” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Warbixin Gobolka Sanaag”
Qalinkii: Cabdinaasir Ibraahim
Waxa aan iin barteed lahayn “Siduu-doono yeelaha.” Mahad idilkeed isagaa mutaystay. Wuxu addoomihiisa faray in ay dhulka maraan si ay wax uga bartaan.
Qoraalkani wuxuu noqday kii iigu adkaa muddo saddex sanno ah ee aan sameeyo. Toban goor ayaan u holladay in aan bilaabo, uu igu adkaaday meel aan ka bilaabo ayaan garan waayay. Waxa kala batay wixii aan Gobolka Sanaag ku soo arkay iyo awoodda xirfaddayda qoraal. Si kale haddii aan u dhigo. Hummaagyadii quruxda badnaa ee indhaha aan ku qaaday, ayaa igu qaatay wakhti door ah in aan qoraal u beddelo.Wax kasta oo cariya maskaxda waan sameeyay si uu u soo baxo qoraal dareen ku yimid. Kal-tirsiga Soomaalida bisha labaad ee Cawl dadka qaarna u yaqaannaan candho-qoys oo ah bisha labaad ee gu’ga shanteedii maalin lamminneed, oo tirsiga Miilaadiga ku aaddan June. 12th .2017 goor casar-dheere ah, gooreynta Soomaalida, ayuu safarkii aan Gobolka Sanaag ku tagnay ka bilaabmay xaafadda Hargeysada-cusub ee Bariga Hargeysa. Magaalada Berbera ayaan ka afurnay. Fiid cawl ayaan socodkayagii Berbera ka sii ambaqaadnay.
Waxa aragga noo dheeraa in ay warbixin wanaagsan naga siiyeen dhammaan goobihii ay na geeyeen. Waxa aan ka faa’iidaysannay waayo-aragnimadooda oo gaadhsiisnayd “Ged-yaqaannimo” Intaa haddii aan kaga imaaddo Mahadin Alle, furfurasho hadal iyo afeeftaydii, waxa aan uga gudbi dulucda qoraalka Safarkii Sanaag.
Taariikh-yahannada reer Masar ee geyiga wax ka qora gaar ahaanna kuwa aqoonta “Egyptology” darsaa way xusaan Gobolka Sanaag in uu yahay Qalbiga dhulkii”The land of Punt”
“Dalkan waxa ugu mudan Ceerigaab uguna muuq dheere, Waa Maakhir-koostii la Degey mar aan la koobayne.” Xaaji Aadan Af-calooc.
Waxa ay leedahay carro caska inta badan dhulka Oogada lagu yaqaan oo ku habboon daaqsinka iyo xoolo-dhaqashada, taas oo sahashay in ay ka baxaan dhir aad u dhaadheer oo kamid yihiin qudhaca iyo Dayibka oo aad badhtanka magaalada aad ku arkaysaa dhir 15 mitir dhererkoodu gaadhayay. Waxa magaalada ku xeeran raacato, ishinka ugu badan ee ay dhaqdaan yahay “Adhi” Hodannimada dadka reer Ceerigaabo waxa ay ku dhisan tahay duunyadooda mawaashiga ay dhaqdaan waxa ay u jaraan wax walba.